Izindatshana zikaShane Barker zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge Shane Barker
I-2018 ibone cishe i-80% yabathengisi basebenzisa okuqukethwe okubonakalayo kumasu abo ezokuxhumana nabantu. Ngokufanayo, ukusetshenziswa kwamavidiyo kukhule cishe ngama-57% phakathi kuka-2017 no-2018. Manje sesingene esikhathini lapho abasebenzisi bafuna okuqukethwe okukhangayo, futhi bakufuna ngokushesha. Ngaphezu kokwenza lokho kube nokwenzeka, yingakho kufanele usebenzise okuqukethwe okubukwayo: Kulula ukwabelana ngokulula ukukhumbula ubumnandi nokuzibandakanya Ngakho-ke kuyacaca ukuthi udinga ukukhulisa umdlalo wakho wokumaketha obukwayo.
I-Google Analytics muva nje ifake isici esihle kakhulu sokuhlaziya umphumela obambezelekile wezivakashi zakho owaziwa njengokuhlaziywa kweqoqo, okuyinguqulo ye-beta yosuku lokutholwa kuphela. Ngaphambi kwalokhu kufakwa okusha, abaphathi bewebhu nabahlaziyi be-inthanethi bebengeke bakwazi ukubheka impendulo ebambezelekile yezivakashi zewebhusayithi yabo. Kwakunzima kakhulu ukuthola ukuthi izivakashi ze-X zivakashele isiza sakho ngoMsombuluko nokuthi zingaki zazo ezivakashele ngosuku olulandelayo noma